Matiu 26 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ozi Ọma Matiu Dere 26:1-75
Ndị nchụàjà kpara nkata igbu Jizọs (1-5)
Otu nwaanyị wụrụ mmanụ na-esi ísì ọma n’isi Jizọs (6-13)
Ememme Ngabiga ikpeazụ na ịrara Jizọs nye (14-25)
Jizọs malitere Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị (26-30)
Jizọs kwuru na Pita ga-agọnahụ ya (31-35)
Jizọs kpere ekpere na Getsemeni (36-46)
Mgbe e jidere Jizọs (47-56)
Mgbe a na-ekpe Jizọs ikpe na Sanhedrin (57-68)
Pita gọnahụrụ Jizọs (69-75)
26 Mgbe Jizọs kwuchara ihe a niile, ọ sịrị ndị na-eso ụzọ ya: 2 “Unu ma na ọ fọrọ abalị abụọ ka e mee Ememme Ngabiga,+ a ga-enyefekwa Nwa nke mmadụ ka e gbuo ya n’elu osisi.”+ 3 Ndị isi nchụàjà na ndị okenye ndị Juu wee zukọta na mbara èzí nnukwu onye nchụàjà aha ya bụ Kayafas+ 4 ma gbaa izu+ otú ha ga-esi jiri aghụghọ jide Jizọs, gbuokwa ya. 5 Ma, ha nọ na-asị: “Ọ bụghị n’oge ememme a, ka ndị mmadụ ghara ịgbawa aghara.” 6 Mgbe Jizọs nọ na Betani, n’ụlọ Saịmọn onye ekpenta,+ 7 otu nwaanyị ji mkpọ̀ alabasta,* nke mmanụ na-esi ísì ọma dị n’ime ya, bịakwute ya. Mmanụ ahụ dịkwa oké ọnụ. Nwaanyị ahụ wee malite ịwụkwasị ya n’isi ya ka ọ nọ na-eri ihe. 8 Mgbe ndị na-eso ụzọ ya hụrụ ihe a, ha were iwe, sị: “Gịnị mere e ji laa mmanụ a n’iyi? 9 N’ihi na a gaara ereta ya ezigbo ego ma nye ya ndị ogbenye.” 10 Ebe Jizọs ma ihe ha na-ekwu, ọ sịrị ha: “Gịnị mere unu ji na-enye nwaanyị a nsogbu? O meere m ihe ọma. 11 N’ihi na unu na ndị ogbenye nọ mgbe niile,+ ma mụ na unu agaghị anọ mgbe niile.+ 12 Nwaanyị a tere m mmanụ a na-esi ísì ọma ka ọ kwadebe m maka olili.+ 13 N’eziokwu, ana m asị unu na n’ebe ọ bụla a na-ekwusa ozi ọma a n’ụwa niile, a ga na-akọ ihe nwaanyị a mere, jiri ya na-echeta ya.”+ 14 Otu n’ime ndịozi ya iri na abụọ, onye aha ya bụ Judas Iskarịọt,+ gakwuuru ndị isi nchụàjà+ 15 wee sị ha: “Gịnị ka unu ga-enye m ka m rara ya nye n’aka unu?”+ Ha wee kwekọrịta inye ya mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ.+ 16 N’ihi ya, malite mgbe ahụ gawa, ọ nọ na-achọ oge ga-adaba adaba ọ ga-eji rara ya nye. 17 N’ụbọchị mbụ nke Ememme Achịcha Na-ekoghị Eko,+ ndị na-eso ụzọ Jizọs bịakwutere ya, sị ya: “Olee ebe ị chọrọ ka anyị kwadebere gị ka ị nọrọ rie nri Ememme Ngabiga?”+ 18 O wee sị ha: “Banyenụ n’ime obodo, n’ụlọ onye dị otú a. Sịnụ ya, ‘Onye Ozizi sịrị: “Oge m a kara aka dị nso. Mụ na ndị na-eso ụzọ m ga-eme Ememme Ngabiga n’ụlọ gị.”’” 19 Ndị na-eso ụzọ Jizọs mere ihe ọ gwara ha, kwadebekwa maka Ememme Ngabiga ahụ. 20 Mgbe o ruru ná mgbede,+ ya na ndị na-eso ụzọ ya iri na abụọ ahụ nọ na-eri ihe na tebụl.+ 21 Mgbe ha nọ na-eri ihe, ọ sịrị ha: “N’eziokwu, ana m asị unu, otu onye n’ime unu ga-arara m nye.”+ 22 Ihe a wutere ha nke ukwuu. Ha niile n’otu n’otu amalite ịsị ya: “Onyenwe anyị, ọ bụghị m, ka ọ̀ bụ m?” 23 O wee sị ha: “Ọ bụ onye mụ na ya ga-amanyekọ aka n’efere ga-arara m nye.+ 24 N’eziokwu, Nwa nke mmadụ na-ahapụ unu, otú e dere banyere ya. Ma, onye ga-arara Nwa nke mmadụ nye+ ga-ata ahụhụ.+ Ọ gaara akara onye ahụ mma ma a sị na a mụghị ya amụ.”+ 25 Judas, onye na-aga ịrara ya nye, wee sị ya: “Onye Ozizi,* ọ̀ bụ m?” Jizọs asị ya: “Ọ bụ gị kwuru ya.”* 26 Mgbe ha nọ na-eri ihe, Jizọs weere otu ogbe achịcha. Mgbe ọ gọzichara ya, ọ nyawara ya,+ nye ya ndị na-eso ụzọ ya, sị ha: “Naranụ, taa. Nke a pụtara ahụ́ m.”+ 27 O bukwaara iko, kelee Chineke, bunyekwa ha ya, sị: “Unu niile, ṅụọnụ ihe dị na ya,+ 28 n’ihi na nke a pụtara ọbara m,+ bụ́ ‘ọbara ọgbụgba ndụ’+ nke a ga-awụpụ ka e wee gbaghara ọtụtụ ndị+ mmehie ha.+ 29 Ma ana m asị unu na agaghị m aṅụ mmanya si ná mkpụrụ vaịn ọzọ ruo ụbọchị ahụ mụ na unu ga-aṅụ nke ọhụrụ n’Alaeze Nna m.”+ 30 N’ikpeazụ, mgbe ha bụchara abụ otuto,* ha gawara n’Ugwu Oliv.+ 31 Jizọs gwaziri ha, sị: “Unu niile ga-ahapụ m n’abalị a, n’ihi na e dere, sị: ‘M ga-egbu onye ọzụzụ atụrụ, ìgwè atụrụ ya ga-agbasasịkwa.’+ 32 Ma, a kpọlitechaa m n’ọnwụ, m ga-ebu unu ụzọ gaa Galili.”+ 33 Ma Pita sịrị ya: “Ọ bụrụgodị na ndị ọzọ niile ahapụ gị, o nweghị ihe ga-eme ka m hapụ gị.”+ 34 Jizọs wee sị ya: “N’eziokwu, ana m asị gị, n’abalị a, tupu oké ọkpa akwaa, ị ga-agọnahụ m ugboro atọ.”+ 35 Pita asị ya: “Ọ bụrụgodị na m ga-eso gị nwụọ, e nweghị ihe ga-eme ka m gọnahụ gị.”+ Ndị ọzọ niile na-eso ụzọ ya kwukwara otu ihe ahụ. 36 Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya bịaziri ebe a na-akpọ Getsemeni.+ O wee sị ha: “Nọdụnụ ala ebe a ka m gaa ebe nke ọzọ kpee ekpere.”+ 37 Ọ kpọọrọ Pita na ụmụ Zebedi abụọ. Ọ malitekwara ichegbu onwe ya nke ukwuu.+ 38 O wee sị ha: “Ọ na-ewutesi m ike.* Nọrọnụ ebe a, sorokwanụ m na-eche nche.”+ 39 Mgbe ọ gatụrụ n’ihu, o gburu ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala, kpee ekpere, sị:+ “Nna m, ọ bụrụ na o kwe mee, ka m ghara ịṅụ ihe dị n’iko a.+ Ma, ọ bụghị ka e mee ihe m chọrọ, kama ka ihe ị chọrọ mee.”+ 40 Ọ bịaghachiri n’ebe ndị na-eso ụzọ ya nọ ma hụ ka ha na-ehi ụra. O wee sị Pita: “Ọ̀ bụ na unu enweghị ike iso m chee nche ọ bụrụgodị otu awa?+ 41 Na-echenụ nche,+ na-ekpekwanụ ekpere mgbe niile,+ ka a ghara ịnwata unu.+ N’eziokwu, ọ na-agụ mmadụ ime ihe dị mma,* ma anụ ahụ́ ya adịghị ike.”+ 42 Ọ gara ọzọ kpee ekpere nke ugboro abụọ, sị: “Nna m, ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ka m ghara ịṅụ ihe dị n’iko a, ka uche gị mee.”+ 43 Ọ bịaghachikwara hụ ka ha na-ehi ụra, n’ihi na ụra ji ha aka ọjọọ. 44 Ọ hapụrụ ha ọzọ pụọ gaa kpee ekpere nke ugbo atọ, kwughachi otu ihe ahụ. 45 Ọ bịaghachiri ebe ndị na-eso ụzọ ya nọ, sị ha: “N’ụdị oge dị otú a ka unu na-ehi ụra, na-ezukwa ike. Oge eruola ka a rara Nwa nke mmadụ nye n’aka ndị mmehie. 46 Bilienụ ka anyị pụọ. Lee, onye ga-arara m nye abịala nso.” 47 Mgbe ọ ka kpụ okwu n’ọnụ, Judas, otu n’ime ndịozi ya iri na abụọ, bịara, ya na ìgwè mmadụ ndị ji mma agha na okpiri. Ọ bụ ndị isi nchụàjà na ndị okenye ndị Juu dunyere ha.+ 48 Onye ga-arara ya nye nyere ha ihe àmà, sị: “Onye ọ bụla m susuru ọnụ, ọ bụ ya. Jidenụ ya.” 49 O wee gakwuru Jizọs, sị: “Onye Ozizi,* ndeewo.” O wee jiri nwayọọ susuo ya ọnụ. 50 Ma Jizọs sịrị ya: “Enyi, gịnị mere i ji bịa ebe a?”+ Ha wee bịa jide Jizọs, kpụrụ ya. 51 Ma, otu n’ime ndị so Jizọs mịịrị mma agha ya, gbuo ya ohu nnukwu onye nchụàjà, bepụ ya ntị.+ 52 Jizọs wee sị ya: “Mịghachi mma agha gị n’ọbọ ya,+ n’ihi na ndị niile na-egbu ndị ọzọ mma agha ga-esi ná mma agha laa n’iyi.+ 53 Ka ì chere na mụ agaghị arịọli Nna m ka o zitere m ọtụtụ puku* ndị mmụọ ozi ugbu a?+ 54 Ya dị otú ahụ, oleezi otú Akwụkwọ Nsọ, nke kwuru na ihe ga-esi otú a mee, ga-esi mezuo?” 55 Jizọs gwaziri ìgwè mmadụ ahụ, sị: “Ùnu ji mma agha na okpiri bịa ijide m ka à ga-asị na unu bịara ijide onye ohi? M na-anọdụ ala kwa ụbọchị n’ụlọ nsọ, na-ezi ihe,+ ma unu ejideghị m.+ 56 Ma ihe a niile mere ka ihe ndị amụma dere n’Akwụkwọ Nsọ wee mezuo.”+ Ndị na-eso ụzọ ya niile wee hapụ ya gbaa ọsọ.+ 57 Ndị jidere Jizọs duuru ya gakwuru Kayafas,+ bụ́ nnukwu onye nchụàjà, ebe ndị odeakwụkwọ na ndị okenye zukọtara.+ 58 Ma Pita nọ ebe dị anya na-eso ya n’azụ, ruo na mbara èzí nnukwu onye nchụàjà ahụ. Mgbe ọ banyere n’ime, o so ndị na-eje ozi n’ụlọ nọrọ ọdụ ka ọ hụ ihe ga-emecha mee.+ 59 N’oge ahụ, ndị isi nchụàjà na ndị ọzọ so ná ndị Sanhedrin* nọ na-achọgharị ebubo ha ga-ebo Jizọs ka ha wee gbuo ya.+ 60 Ma ha achọtaghị, ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị akaebe ụgha pụtara.+ E mechaa, mmadụ abụọ pụtara 61 wee sị: “Nwoke a sịrị, ‘Enwere m ike ịkwatu ụlọ nsọ Chineke ma jiri ụbọchị atọ rụghachi ya.’”+ 62 Nnukwu onye nchụàjà wee bilie ọtọ, sị ya: “Ị̀ gbara nkịtị? Ị́ nụghị ebubo ndị a na-ebo gị?”+ 63 Ma Jizọs gbachiri nkịtị.+ N’ihi ya, nnukwu onye nchụàjà ahụ sịrị ya: “Eji m Chineke dị ndụ na-eme ka ị ṅụọ iyi na ị ga-agwa anyị ma ọ̀ bụ gị bụ Kraịst, Ọkpara Chineke.”+ 64 Jizọs asị ya: “Ọ bụ gị kwuru ya.* Ma ana m asị unu: Si ugbu a gawa, unu ga-ahụ Nwa nke mmadụ+ ka ọ nọ ọdụ n’aka nri Chineke dị ike*+ ma na-abịa n’ígwé ojii nke eluigwe.”+ 65 Nnukwu onye nchụàjà wee dọwaa uwe elu ya, sị: “O kwuluola Chineke! Ànyị ka kwesịrị ịchọwa ndị akaebe? Unu anụlanụ na o kwuluola Chineke. 66 Gịnị ka unu chere?” Ha asị: “O kwesịrị ịnwụ.”+ 67 Ha gbụrụ ya asọ mmiri n’ihu+ ma suo ya ọkpọ.+ Ndị ọzọ mara ya ụra n’ihu,+ 68 sị ya: “Kraịst, buoro anyị amụma. Ònye tiri gị ihe?” 69 Pita nọkwa ọdụ na mbara èzí ahụ. Otu nwa agbọghọ na-eje ozi ebe ahụ wee bịakwute ya, sị: “Gị na Jizọs onye Galili na-anọ.”+ 70 Ma ọ gọrọ agọ n’ihu ha niile, sị: “Amaghị m ihe ị na-ekwu.” 71 Mgbe ọ gara n’ọnụ ụzọ ámá, nwa agbọghọ ọzọ matara na ọ bụ ya wee gwa ndị nọ ebe ahụ, sị: “Nwoke a na Jizọs onye Nazaret na-anọ.”+ 72 Ọ gọkwara agọ, ṅụọ iyi, sị: “Amaghị m nwoke ahụ.” 73 Mgbe obere oge gachara, ndị guzo gburugburu bịara sị Pita: “O doro anya na ị bụ otu n’ime ha, n’ihi na n’eziokwu, asụsụ gị agbaala gị àmà.” 74 Ọ maliteziri ịbụ onwe ya ọnụ na ịṅụ iyi, na-asị: “Amaghị m nwoke ahụ.” Ozugbo ahụ, oké ọkpa akwaa. 75 Pita wee cheta na Jizọs sịrị: “Tupu oké ọkpa akwaa, ị ga-agọnahụ m ugboro atọ.”+ O wee pụọ n’èzí bee ezigbo ákwá.
^ Na Grik, “Rabaị.” Gụọ Nkọwa Okwu.
^ Ma ọ bụ “abụ ọma.”
^ Na Grik, “Ọ na-ewute mkpụrụ obi m nke ukwuu, ọbụna ruo ọnwụ.”
^ Na Grik, “mmụọ dị njikere.”
^ Na Grik, “ụsụụ iri na abụọ.” Otu ụsụụ ndị agha ndị Rom n’oge ochie na-adị malite n’ihe dị ka puku anọ ruo puku isii. Na Baịbụl, “ụsụụ” nwere ike ịbụ ihe a na-agaghị agụtali ọnụ.
^ Na Grik, “n’aka nri nke ike.”